चन्दागिरि खुलेकै दिन आन्तरिक पर्यटकको यस्तो भीड (फोटो फिचर) ! « MNTVONLINE.COM
चन्दागिरि खुलेकै दिन आन्तरिक पर्यटकको यस्तो भीड (फोटो फिचर) !
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको चन्द्रागिरिको केवलकार आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि सरकारले लकडाउन शुरु गरेपछि केबलकार बन्द भएको थियो ।